Kuqubuke umbhikisho wabasebenzi bakwamasipala weTheku – Journalismiziko
Home›News›Kuqubuke umbhikisho wabasebenzi bakwamasipala weTheku
Abasebenzi abangaphansi komkhandlu we-DSW kwamasipala weTheku bathukuthele bavala uthelawayeka uN2.
Emva kokungatholani phakathi kwabaphathi kanye nabasebenzi abathutha imfucuza yadoti kumasipala weTheku. Basebephikelela emgwaqeni onguthelawayeka uN2, lesenzo sidale ukuthi kubenokushaya konwabu ekuhambeni kwezimoto.
Lesisiteleka esidonse isikhathi eside, saphinde sashiya eminye yemiphakathi emaphakathi neTheku inemfucuza engathuthiwe.
Kulezi zindawo sibala, izindawo ezifana no-Florida road lapho ekugcwele khona izinxanxathela zezindawo zokuzithokozisa, lokhu kudale ukuthi amanye amabhizinisi athinteke kabi ngenxa yadoti obungathuthwanga. Kanye ne Morningside okufaka nezindawo ezinjengo Sydenham.
Omunye wabasebenzi bakwa-DSW, uphawule wathi isizinda nesizathu salesisiteleka sibangelwe ukushaya konwabo kuhlangothi lwabaphathi ekukhokheleni ukusebenza isikhathi esengeziwe (overtime). Ube esesikhumbuza ukuthi ekuqaleni kwalonyaka kuke kwabikwa isigameko esifana nalesi lapho bengenele khona umbhikisho ngenxa yesizathu esisodwa sokunganeliseki ngemiholo yabo.
ULungi Choco, uphawule wathi, “abaphathi bayasiphoqa ukuthi singenele isiteleka, ngoba kuba yilona ulimi abaluzwa kangcono. Mangabe bengahlangabezani nezidingo zethu sizoqhubeka siteleke, idolobha lisale lingcolile”.
Elinye ilungu elisisebenzi sakulomkhandlu sithe, “sengibe ngutoho isikhathi eside, besingathokozela ukuqashwa ngokuphelele. Okunye kwezizathu esizilwelayo lezo”.
Isithethi sakwamasipala weTheku, uMsawakhe Mayisela, ozwakale emsakazweni uKhozi FM uphawule wathi, “siyadingida izidingo zabo, besinxusa ukuthi kungavalwa imigwaqo kakhulukazi imigwaqo enguthela wayeka ngoba kumisa ukusebenza okuningi. Waphinde wanxusa imiphakathi ethintekile ukuthi ibuyisele udoti ngaphakathi kuze kube ukusebenza kubuyela esimeni esijwayelekile”.
Uphinde waxolisela ihhovisi likaMeya weThekhu, uMxolisi Kaunde kanye noMasipala wonkana.
Kube sekuvela izikhalazo nakwizakhamizi ezithintekile okubalwa kuzo, uAyanda Mthembu, isikhamuzi esizinze ku-Florida road.
“Ngivuke njengenjwayelo ngiyodla isidlo sami sasekuseni, mangifika ngafica kusavaliwe kwindawo yami yokudlela ngenxa yokuthi udoti ubungaqoqiwe, isimo besihamba ngonyawo lonwabu. Ngizizwe ngiphoxeka ngoba asikujwayele okunjengalesimo”, kusho uMthembu.
Orlando Pirates sign Thulani Hlatshwayo and Deon ...